भावना घिमिरे भन्छिन्, ‘म कसैको दबाबमा अाएर डिसिजन लिने मान्छे होइन’ | Jukson
भावना घिमिरे २०७१ को कात्तिकमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुपमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसयता उनले झण्डै २१ महिना क्यानको सिइओका रुपमा काम गरिन् । तर, गतहप्ताको बुधबार उनले क्रिकेट संघका काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दैं पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । आइसीसीले क्यानलाई निलम्बनमा गरेको छ । क्यान निलम्बन गरेपछि आइसीसीले भावनालाई नेपाली क्रिकेटको स्थानीय अप्रेशन हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । भावनासँग नेपालीपत्रका लागि जनक तिमिल्सिना र रवि अधिकारीले गरेको कुराकानीः
एक पूरानो अन्तर्वार्तामा म क्रिकेटको रुप फेर्छु भन्नुभएको थियो । अचानक राजीनामा दिनुभयो त ?
मैले स्टेप डाउन मात्र गरेको हो । मेरो इन्टेन्स, जिल इन्थुजियाजम त्यो त सकिएको छैन नि । क्रिकेटमा निरन्तर कन्ट्रीबयुसन म अझै पनि गर्न सक्छु । स्टेप डाउन गरे किनभने क्यान यस्तो समयदेखि नन पर्फर्मिङ छ । क्यान ननपर्फर्मिङ हुँदा मेरो रोल पनि ननपफर्मिङ नै छ । एसेप्न नन पफर्मेन्स भयो भयो के हुन्छ? धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, क्यान नन पफर्मिङ भएकाले मेरो रोल पनि नन पर्फर्मिङ भयो । भइरहेका र क्यालेण्डरमा रहेका प्रतियोगिताहरु पनि हुन सकेनन् ।
यस्तो निर्णय लिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?
क्यानको टाइमलाइन हेर्नुहोस । निर्वाचन अगाडि र निर्वाचन पछाडि अनि अदालतमा रहेको मुद्धा ।
राजीनामाका लागि कतैबाट राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको त होइन ?
एकदमै निष्पक्षताका साथ भन्दा त्यो त होइन । कसैको दबाबमा आएरै गरेकै होइन, ब्यक्तिगत रुपमा सन्तुष्ट नभएर गरेको हो ।
कतिपयले राखेपसँग पनि तपाईंको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको बताइरहेका छन । के हो खास कुरा?
मैले काम गर्ने राखेपसँग मिलेर होइन । जतिबेला क्यान भ्याकुममा थियो त्यतिखेर राखेपसँग सोधेर काम गर्नुपर्ने मेरो दायित्व थियो । क्यान बनिसकेपछि मलाई उता गइरहनु परेन । क्यानमा बोर्ड थियो, भ्याकुम थिएन । निलम्बनपछि फरक सिनारियो देखियो । कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन् । तर, राखेपसँग मेरो नराम्रो केही छ जस्तो लाग्दैन । म कसैको दबाबमा आएर डिसिजन गर्ने ब्यक्ति होइन ।
निलम्बनपछि त राखेप र आइसीसीसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको थियो हगि ?
निलम्बनपछि हाम्रो खासै कामहरु केही भएको थिएन । निलम्बन अगाडि राखेपलाई पनि केही जानकारी गराउनुपथ्र्यो । तर, निलम्बनपछि खासै क्यानबाट कामहरु नै भएनन् । त्यसका कारण राखेपलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कामहरु भएनन् ।
राजीनामा कसलाई बुझाउनु भयो ?
मैले मेरो राजीनामा रमेश सिलवाललाई बुझाएकी हुँ ।
अहिले पनि आइसीसीको सम्पर्क ब्यक्तिको रुपमा तपाईंको भूमिका यथावत छ ?
मलाई आइसीसीको लोकल अप्रेशनको जिम्मेवारी दिइएको छ । काम भइरहेको छ । टिम ११ जुलाईमा युके जाँदैंछ, त्यसपछि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन खेल्न नेदरल्याण्डस जान्छ । अहिले जारी क्रिकेट सम्बन्धि कामहरुप्रति म कमिटेड नै छु । अरु पनि केही प्रतियोगिताहरु छ । महिला टिमको पनि प्रतियोगिता आउँदैंछ । त्यसका लागि तयारीहरु गर्नुपर्नेछ । त्यो निरन्तर नै भइरहन्छ ।
आइसीसीको स्थानीय सम्पर्क ब्यक्तिका रुपमा तपाईंको क्षेत्राधिकारभित्र के—के विषयहरु छन्?
धेरै कुराहरु केही छैन । आइसीसीले स्पष्ट मेन्सन गरेको छ, नेशनल टिमले खेल्न पाउने भनेर । नेशनल टिमले खेल्न पाउँदा क्याम्पमा राख्दा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराको स्थानीय रुपमा प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी हो । अरु विकास एजेण्डाहरुबाहेक ।
अहिलेको अवस्थामा घरेलु क्रिकेट मृतजस्तै देखियो नि है ?
मरेको भनेर मलाई लाग्दैन । किनभने, अहिले सिजन नै अफ सिजन छ । मैले बारम्बार भनिरहेकी छु, सेप्टेम्बरसम्म केही आउनुपर्छ । नत्र डोमेस्टिक प्रतियोगिता गराउने कुनै उपाय गरिहाल्नुपर्छ । लामो समय यस्तै अवस्थामा रहेमा त्यो हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मरिहाल्यो भन्ने म त्यति निराशावादी ब्यक्ति होइन् ।
झण्डै २१ महिना क्यानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्नुभयो । त्यो अवधिका महत्वपूर्ण कामहरु के—के हुन जस्तो लाग्छ ?
महत्वपूर्ण कुरा भनेको जे जस्तो भएपनि राष्ट्रिय टिमले खेलिरहेको छ । यु—१९ टुर ग¥यो, त्यतिबेला पनि समस्या नै थियो । सबै समस्या हुँदाहुँदै पनि टिमले खेलिरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदर्शन पनि राम्रो भइरहेको छ । त्यो राम्रो संकेत हो । अर्को कुरा स्पोन्सर आयो । हामीले क्रिकेट खेलाडीहरुसँग पनि सम्झौता ग¥यौं । अकाउटिङ सिष्टम बसाउनका लागि हामीले प्रयास ग¥यौं । समयमै अडिटिङ रिपोर्ट बुझायौं । प्यान र भ्याटमा हाम्रो संस्था थिएन्, त्यसमा पनि दर्ता गरायौं । कर दर्ता सर्टिफिकेट पनि लियौं । यी केही महत्वपूर्ण कामहरु थिए ।
मेरो सम्झौता पनि ६ महिना, ३ महिना हुँदैं बढाइयो । संस्थागत रुपमा निरन्तरतामा कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सकेन । ३ महिना, २ महिना सम्झौता हुँदा टार्गेट पनि सेट गर्न सकेनौं । अस्थिरता थियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले ‘ब्याट फर नेपाल’को आयोजना ग¥यौं । त्यसबाट झण्डै १६ लाख बढी प्रधानमन्त्री उद्धार कोषलाई गएको छ, केही रकम क्यानलाई पनि आएको छ । ‘फिलिप ह्युज’को सम्झनामा क्रिकेट पनि ग¥यौं । फिलिप ह््युज गरेका कारण क्रिकेट डिप्लोमेसी अन्तर्गत क्रिकेट अष्ट्रेलियाले यस वर्ष पनि केही फण्डहरु पठाउने कुरा थियो । तर, क्यानको जारी विवादले त्यो हुन सकेको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामीले भारतमा पनि भ्रमण ग¥यौं । बीसीसीआईसँग पनि सम्बन्ध स्थापित ग¥यौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मुभ पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ । सबैको आँखा नेपाले क्रिकेट विकास गर्न सक्छ भन्नेमा, सबैको विश्वास पनि छ ।
क्यानको विवादले क्रिकेट कुटनीतिका कस्तो असर प¥यो ?
क्रिकेट कुटनीति भन्दा पनि यसले हामीले पाउने ग्रान्टहरुमा ढिलो हुने भयो । बाहिरबाट फण्डिङ गर्नेहरुले टान्सपरेन्सी र फण्ड युटिलाइजेशनलाई मुख्य रुपमा हेर्ने हो । अहिले अवस्थाले हेर्दा उहाँहरुलाई केही असहज महसुस हुन सक्ला । हामी जुन गुड गभर्नेन्स र क्रेडिबिलिटी शो गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सक्या छैन ।
डोमोस्टिक क्रिकेटमा पनि यसले ठूलै असर पारिरहेको छ होइन ?
अन एण्ड अफ द ब्यालेन्स जुन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अफ द फिल्ड हाम्रो धेरै समस्या भयो, अन द फिल्ड खेलाडीहरुले गरिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि खेलिरहनुभएको छ । त्यसको एप्रोसियट गर्नैपर्छ हामीले । यस्तो अवस्थामा मैले पनि केही प्रयास गरिरहेको छु । नामिबियालाई पनि मैले ट्राइ गरेर लिएर आएको हो । त्यसैले म आशावादी छु कि यो समस्या चाडै समाधान हुनेछ । यदि त्यो भएन भने डोमेस्टिक प्रतियोगिता गर्ने कुरामा पनि म केही प्रोभिजन निकालेर टुर्नामेण्ट गराउने प्रयास गर्नेछु । क्यान नट वेट एण्ड सी ।
तपाईंको कार्यकालमा भइरहेका आन्तरिक प्रतियोगिता पनि गर्नु सक्नुभएन नि होइन र ?
अवश्य पनि त्यो हो । त्यसमा केही कारणहरु हाम्रो संस्थाको आन्तरिक कारणहरु छन् । किनभने, डिसिजन मेकर म होइन्, मैले डिसिजन गर्ने होइन । म त कार्यकारी हुँ । डिसिजन मेकिङमै समस्या देखियो । त्यसपछि अर्थक्वेकको समस्याले पनि हामीलाई प्रभावित पारेको छ । त्यसपछि तराईंमा भएको आन्दोलन पनि समस्या सिर्जना भयो । किनभने, तराई नै हाम्रो प्रोडक्सनको मुख्य हब हो । यी सबै कारणहरु यसमा जिम्मेवारी छन् । क्यानले मात्रै गर्न नसकेको भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैंन । हाम्रो कन्ट्रोल बाहिरका फ्याक्टरहरुले पनि असर पारे ।
क्यान किन निलम्बन भयो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
सन् २०१४ अगाडि नै निर्वाचनको दुई वर्षपछि म आउनुभन्दा अगाडि नै १० जना अख्तियारको छानविनमा तानिनुभयो । त्यसपछि पनि लगातार क्यान संरचनामा आउनु सकेन । त्यसपछि एक्टीङ चेयरम्यान आउनुभयो । लिडरसीप नै कसैको ग्रीपमा आउन सकेन । कसैको ग्रीपमा नआएपछि डिसिजन गर्ने, संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भिजन नै सेट हुन पाएन । बोर्डमा पनि अस्थिरता भइरह्यो, कुनै पनि कुरा स्थिर हुन सकेन । टीबी शाह आउनुभयो, उहाँ विरामी पर्नुभयो । त्यसपछि दीपक कोइराला आउनुभयो । त्यसपछि अख्तियारमा सफाइ पाएर बोर्डको १० जना फर्केर आउनुभयो । तर, एक भिजन सेट गरेर अगाडि बढाउने उहाँहरुलाई पनि अप्ठ्यारो भयो । जसका कारण आइसीसीको गाइडलाइन फ्लो हुन सकेन । कतिपय कुराहरु सिंगो बोर्डले गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसमा सबैको एकमत हुन सकेन । आइसीसीले बारम्बार ट्रान्सपरेन्सी र गुड गभर्नेन्सको कुरा गरेको थियो । सेन्ट्रलाइज भएका कुराहरु डिसेन्टलाइज गरे । फाइनान्सियल ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गर्नुभयो । पटक—पटक आएरै पनि यी कुराहरु गर्नुभयो । तर, त्यो हुन नसकेपछि निलम्बन गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा कार्यलय सञ्चालनमा आर्थिक अभाव पनि थियो भन्ने सुनिन्छ नि ?
कार्यलय सञ्चालन मै छैन् । ६ महिनादेखि बैक एकाउण्ट बन्द छ । बैक एकाउण्ट सस्पेण्डेन्ट छ । यदि बैंक एकाउण्ड सस्पेन्डेण्ड नभइदिएको भए नि हामीसँग केही अथोरिटी छैन । सबै सेन्ट्रलाइज बोर्डसँग छ । म त यस्तो पोजिशनमा थिए न मैले स्टाफलाई स्यालरी खुवाउन सक्छु न म टुर्नामेण्ट गर्न सक्छु । न नयाँ स्पोन्सरहरुसँग सम्झौताहरु गर्न सक्छु । जुन काम मैले गर्नुपथ्र्यो त्यो काम नै नहुन नसकेपछि म पोजिशनमा बसिरहनुको के अर्थ भयो र ।
भनेपछि राजीनामासँग जोडिएको एउटा कारण आर्थिक पनि हो ?
आर्थिक भन्दा पनि क्यान नै सञ्चालनमा आउन सकेन । हाम्रो मिनिमन रुपमा पनि संस्था नै चल्न सकेन । टेलिफोन र इन्टरनेट बन्द छ ।
अहिले क्यानमा स्टाफ नै हुनुहुन्छ ?
ग्राउण्ड स्टाफहरु मात्र हुनुहुन्छ । पहिले उहाँहरुले ५ महिनासम्म तलब पाउनु भएको थिएन । मैले एसीसीबाट लिएर उहाँहरुलाई तलब दिए । अहिले दुई तीन महिनादेखि तलब खान पाइरहनु भएको छैन ।
यसमा राखेपसँग केही कोअर्डिनेशन भएन ?
राखेप र क्यानको आ—आफ्नै रेस्टीक्सन छ । राखेपले क्यानलाई पाल्ने होइन । यदि राखेपले क्यानलाई पाल्ने हो भने अरु संस्थाहरु पनि पाल्नुपर्ला । राखेपको आफ्नै प्रक्रियाहरु होलान । तर, यसबारे उहाँहरु पनि जानकार हुनुहुन्छ ।
तपाईमाथि फ्यानसँग मिलेर क्यानको वोर्डलाई बाइपास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
बाइपास भनेको के हो ? मलाई थाहा छैन । फ्यानसँग मिलेर काम गर्नु, फ्यानसँग मिलेर टुर्नामेण्ट गराउनु भनेको बाइपास गर्नु हो र ? नेपाली क्रिकेट अहिले फ्यान बेस, खेलाडीहरुको प्रदर्शन, देशको वेदरका कारण अरु अगाडि छ । त्यो हिसाबले फ्यानहरुलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न सकिदैंन । फ्यानसँग मिलेर मैले कसरी बोर्डलाई वाइपास गरे ? बोर्ड भनेको बोर्ड हो । यदि मैले बाइपास गरेको हो भने १३२ जनाको बोर्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पहिले मलाई फाल्नुपथ्र्यो । आरोप लगाएर मात्र हुँदैंन । उहाँहरु सक्षम हुनुहुन्थ्यो, पावर उहाँहरुसँग थियो भने असक्षमलाई राखिरहन जरुरी थिएन ।
२१ महिनाको अनुभवका आधारमा नेपाली क्रिकेटको सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?
मैले त नेपाली क्रिकेटको धेरै सम्भावना देखेकी छु । आजैदेखि काम गर्न थाल्ने हो भने हामी ७ वर्षमा टेष्ट खेल्न सक्छौं । काम भने आजैदेखि गर्नुपर्छ । पुरातन होइन्, इनोटिभ तरिका फरक बाटोबाट कामहरु गर्नुपर्छ ।
क्यानमा सिइओका रुपमा फर्किने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिलेकै अवस्था भने म फर्किन्छु भन्न सक्दिन । भविष्यमा कुनै त्यस्तो अवसर आयो भने क्रिकेटको सेवा गर्न म तयार छु ।
केही मानिसहरुले तपाईलाई मिडिया स्टन्ट गरेको अरोप लगाएका छन् नि के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता कुरा पहिला पनि चलेकै हुन् । नामिबियासँगको खेल हुनुपुर्व धेरै कुराहरु बाहिर आएका थिए । उनीहरुसँग नेपालमा खेल हुँदैन भनेर प्रचार समेत गर्न खोजियो । तर अन्तमा भएरै छाड्यो । अब यसलाई पनि के मिडिया स्टन्ट भन्ने ।
- See more at: http://www.nepalipatra.com
बोल्टको १०० मिटर दौडमा लगातार तेस्रो पटक स्वर्ण पदक
‘फाटेको जुत्ता’ मा व्यस्त प्रियंकाको लुक्स सार्वजनिक
विजया दशमीको चौथो दिन आज पनि टीका लगाईंदै
पोखरामा पौडी खेल्दा डुवेर एक जनाको मृत्यु